Ngokufinyelela noma ukuvakashela ekhaya yomunye, abantu nakanjani ukuwela ephasijini noma foyer. Kuthiwa abaphilayo - inhliziyo efulethini futhi ephasijini - ebusweni bakhe. Kuyinto kule kwesisekelo kungaba sahlulele abantu Sebawoti, nokuhlolwa kwabo maqondana izivakashi. Uma ephasijini ingcolile futhi ungakhululekile, ngakho lapha awahloniphi ngokwabo kanye nabanye. Ngakolunye uhlangothi, abanikazi wokungenisa izihambi ukuba ucabangisise isimo emzini wabo ne izinyathelo zokuqala wayeyinono, ezikhangayo ngokuya induduzo, futhi waba mnandi wobungane.
obuncane eqolo ifenisha
Dala i-ngokwezifiso design ezithakazelisayo usebenzisa veshchichek yokuqala, izinhlobo cute, izinto zokuhlobisa. Ngokwesibonelo, ungakwazi abeke usofa ihholo noma banquette - ukhululekile futhi cute.
Bench - kuyinto ifenisha enjalo, okuyinto yakhelwe kufike abantu ababili. It yakhelwe ukuqinisekisa ukuthi umuntu engena endlini, wahluleka ukuzibamba hlala phansi, ukushintsha izicathulo noma ukushaya ucingo.
Ngivame usofa ihholo ukuze ibekwe eduze isicabha. Akukona ivelele isitayela kanye Umbala kwi zasemuva zezinye izinhlelo ifenisha senziwe yokubhala yonke ephasijini noma foyer. Kepha izinto, kumelwe kube lula ukuhlanza futhi ugeze bona. Uma lokhu izicubu, kuyinto efiselekayo ukuthi spoilt by yokuhlanza ezimanzi, futhi musa fade. Imibala akufanele kube esikhanya kakhulu futhi uphawu, kungenjalo kusheshe ezingcolile.
Zama ukubeka usofa encane ephasishi, futhi kuyoba ucezu ivumelane kakhulu futhi ukhululekile ifenisha, maduze nje zazihlanganisa bahle. Akunakusetshenziswa akufanele iwukunciphisa usayizi endaweni ingqikithi zako.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile lesi sici elingaphakathi "bamba" kuya ephasijini ifenisha, yena zingahlangana zakhe naleli nezinye nempahla ikamelo, ezifana egumbini lokuphumula, bese nganoma isiphi isikhathi ukwazi ukuthi uthuthele, uma abanikazi, isibonelo, unqume ukushintsha isitayela ephasishi noma ukushintsha ifenisha .
Ngisho isikhala esincane kungaba ukuthola isisombululo ebucayini ezokwenza beveza ilingane kusofa ephasishi. Makube nesizotha usayizi, kodwa ngeke kube ukusebenza okugcwele lombhede. lula yayo itholakala khona amatafula yangaphakathi, esemgwaqweni ngokushesha ngaphansi kwesihlalo noma ngakho. IKhabhinethi ingagcina izinto ezidingekayo: isibonelo, okhilimu for nezicathulo noma nezicathulo uqobo.
It kuvela ukuthi obuncane ifenisha ongenza "izindima" amaningi: ukuba esihlalweni futhi isitoreji izinto kanyekanye.
Zama ukubeka usofa ephasijini, "Optimus" isibonelo. It is zihlukaniswa obugagu futhi okwakhe lemigqa. Lokhu kusofa is kahle ababulawa esihlalweni ngakolunye uhlangothi kanti kwedeski encane nge wokukha ukuvulwa ngakolunye uhlangothi. Isihlalo wenziwe zokwenziwa lesikhumba ekahle kakhulu uma udinga yokuhlanza ezimanzi ephasishi. Zonke ezinye izingxenye zakhiwe imibala chipboard enhle, ulingisa izinkuni.
usofa okunjalo ephasishi akakwazi ukuba like abanikazi futhi asethule iyiphi ngisho ngesizotha kulungisile Igumbi ejwayelekile obugagu kanye intuthuko.
19 Udonga iKhabhinethi: imishini ezokuxhumana kwenethiwekhi isibhakela
Ingabe izindlela eziningana indlela ukuqoqa embhedeni
Imibhede Inflatable kanye usofa inflatable: zonke amamodeli abakhiqizi
Ithebula Console: iziphi izinzuzo zayo?
Ephusheni, ukuba ingane - izochachiswa incwadi iphupho
Alexander Blok, "AmaSkithe." Ukuhlaziywa isifinyezo kanye inkondlo
Korean imvunulo yesizwe: incazelo. Isiko-Korean
Amathempeli asendulo Cambodia: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Ngingathola abakhulelwe uma indoda ingazami sesiphelile? imicabango yabantu uchwepheshe
Umdlavuza wempuphu wamaphaphu: izigaba, ukwelashwa, umlando wezokwelapha. I-peripheral lobe carcinoma
Kuyini ingxube yokululama phansi?
"Izandla ezintathu" - isithonjana UnguNina KaNkulunkulu. Okwakushiwo nomlando imifanekiso